Nkwekọrịta anyị na NCS Sheffield - Element Society
Ntinye aka anyị na NCS Sheffield
ANYỊ NTỤKWU NDỊ SHEFFIELD
Ọ bụ ebumnuche anyị iji na-agba ọsọ maka usoro ndị a na-ejikọta n'etiti ọha na eze nke dị mma na ịnweta maka ndị na-eto eto.
Anyị na-anwa anyị kacha mma iji nabata ndị na-eto eto nwere mkpa dịgasị iche iche ma mee nke a n'okwu ikpe. N'ebe ndị na-eto eto ma ọ bụ ndị nne na nna gosiri ọgwụ / nkwado chọrọ na ngwa ha, anyị ga-akparịta ụka iji nwetakwuo ihe ọmụma ma rụọ ọrụ na ndị niile so maka ngwọta kachasị mma.
Anyị na-agba mbọ ịhụ na nchekwa nke ndị na-eso, ndị ọrụ, ndị ọrụ afọ ofufo na ndị mmekọ n'oge mmemme ahụ. Anyị na ndị ọrụ ibe anyị nwere ahụmahụ na-arụkọ ọrụ, jiri ndị ọrụ zuru ezu zụrụ azụ ma na-agbaso iwu niile dị mkpa. Anyị na-achọ ndị na-eso ụzọ ịgbaso usoro omume dị mfe.
Mmekọrịta siri ike
Anyị na-enye usoro NCS nkwado site na nkwado nke otu ìgwè nke otu nwere ahụmahụ dị ịrịba ama nke iso ndị na-eto eto rụọ ọrụ. Anyị na-arụ ọrụ site n'enyemaka nke ndị isi obodo na ụlọ akwụkwọ.
Ndị ọrụ a zụrụ azụ
N'oge niile, ndị na-eto eto na ndị nkụzi ma ọ bụ ndị nkụzi na-esonyere ha, onye ọrụ kachasị na ya ga-abụ 1: 7. Ihe niile na-eme n'èzí na-arụ ọrụ na-eduzi ndị nkụzi ruru eru. Onye otu ọ bụla na-eduzi otu onye nkụzi maka ihe ka ọtụtụ n'usoro ihe omume ahụ. Ejiri nlezianya ahọrọ ndị ọrụ niile, na-azụ ma zụọ ha n'ọrụ niile ha na-enye. Onye ọ bụla a na-arụ ọrụ site na Element chọrọ ka a nyochaa DBS (nke a maara dịka CRB).
Ịkwado iwu niile dị mkpa
Anyị na-agbaso iwu niile dị mkpa na, ma ọ bụrụ na o kwesịrị ekwesị, ndị mmekọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ n'èzí nyere ikikere n'okpuru Ntọala Ngwá Ọrụ Adị Ọrụ 2004. Anyị (ma ọ bụ ndị mmekọ anyị) na-emepụta nyocha zuru ezu maka ihe ize ndụ maka ihe niile. A na-azụ ndị ọrụ niile iji chọpụta, chọpụta ma mebie ihe ize ndụ ọ bụla na-ebili n'oge usoro ihe omume ahụ.
NCS bu ihe gbasara ihe isi ike na ime onwe gi. Anyị na-atụ anya nraranye, nraranye na ịnụ ọkụ n'obi. Ndị na-eso ha ga-ahụ maka ịgbaso usoro omume anyị dị mfe n'oge usoro ihe omume ahụ. Ọ bụrụ na onye so na-arụ ọrụ ma ọ bụ jiri nwayọọ nwayọọ mebie ụkpụrụ omume a, mgbe ahụ, anyị ga-agwa ha ka ha hapụ usoro ihe omume ahụ. N'okwu a, onye na-eto eto ga-alaghachi n'ụlọ.
Usoro Omume Kwekọrọ
1. Soro iwu nchekwa na iwu
2. Naanị hapụ saịtị yana Mentor
3. Agaghị aga n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ ndị ọzọ
4. Bido n'ime ụlọ gị mgbe 10.45pm gasịrị
5. Ọ dịghị mmanya, ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ penknives
6. Na-asọpụrụ ma na-agụnye ndị ọzọ